परमेश्वोर को मात्र बाटो बाइबल बाट
आदिमा परमेश्‍वरले आकाशमण्डल र पृथ्‍वी सृष्‍टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1: 1
तब परमप्रभु परमेश्‍वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनुभयो, र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो, र मानिस जीवित प्राणी भए। उत्पत्ति 2:7
यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वरले मानिसलाई मस्‍त निद्रामा पार्नुभयो, र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरूमध्‍येको एउटा निकाल्नुभई त्‍यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो। 22जुन करङ परमप्रभु परमेश्‍वरले मानिसबाट निकाल्‍नुभएको थियो, त्‍यसबाट एउटी स्‍त्री बनाउनुभई मानिसकहाँ ल्‍याउनुभयो। उत्पत्ति 2:21-22
अनि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल फल भएको हरेक किसिमको रूख परमप्रभु परमेश्‍वरले भूमिबाट उमार्नुभयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रूख र असल र खराबको ज्ञान दिने रूख पनि लगाउनुभयो। उत्पत्ति 2:9
परमप्रभु परमेश्‍वरले बनाउनुभएका वन-पशुहरूमध्‍ये सर्प सबभन्‍दा धूर्त थियो। त्‍यसले स्‍त्रीलाई भन्‍यो, “के परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रूखको फल नखानू भनी भन्‍नुभएको छ? उत्पत्ति 3: 1
जब स्‍त्रीले त्‍यस रूखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहरलाग्‍दो, र बुद्धि पाउनलाई त्‍यस रूखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्‍यस रूखको फल टिपेर खाइन्, र आफ्‍ना पतिलाई पनि दिइन्, र उनले पनि खाए। उत्पत्ति 3:6
एक जना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो, र पापबाट मृत्‍यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्‍यु फैलियो। रोमी 5:12
तर समयको पूर्णतामा परमेश्‍वरले आफ्‍ना पुत्रलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी स्‍त्रीबाट जन्‍मनुभयो, तथा व्‍यवस्‍थाको अधीनमा जन्‍मनुभयो। गलाती 4: 4
येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ
बालक बुद्धिले भरिपूर्ण भएर बढ्‌दै र बलियो हुँदैजानुभयो, र परमेश्‍वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। लूका 2:40
अब ती दिनमा येशू गालीलको नासरतबाट आउनुभयो, र यूहन्‍नाबाट यर्दन नदीमा बप्‍तिस्‍मा लिनुभयो। मर्कुस 1: 9
येशू पवित्र आत्‍माको शक्तिमा गालीलमा फर्कनुभयो, र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिँजियो। लूका 4:14
त्‍यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “आओ, हामी पारिपट्टि जाऔं।” 36अनि भीड़सँग बिदा लिएपछि, उहाँ जुन डुङ्गामा बस्‍नुभएको थियो त्‍यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्‍नासाथ लगे। र अरू-अरू डुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। 37अनि त्‍यहाँ ठूलो हुरी-बतास चल्‍यो, र छालहरू डुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्‍म कि डुङ्गा पानीले भरिन लाग्‍यो। 38उहाँ आफैचाहिँ डुङ्गाको पछिल्‍लो भागमा एउटा सिरानी लाएर निदाइरहनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्‍दै बिउँझाए, “गुरुज्‍यू, हामी डुब्‍न लाग्‍यौं भन्‍ने के तपाईंलाई वास्‍ता छैन?” 39तब उहाँ बिउँझनुभयो, र बतासलाई हप्‍काउनुभयो, र समुद्रका छालहरूलाई भन्‍नुभयो, “शान्‍त हो! रोकिजा!” अनि बतास थामियो र ठूलो सन्‍नाटा छायो। मर्कुस 4: 35-39
जब साँझ पर्‍यो, तब तिनीहरूले उहाँकहाँ भूत लागेका धेरै जनालाई ल्‍याए। र उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरूलाई निकाल्‍नुभयो, र जति बिरामी थिए, सबैलाई निको पार्नुभयो। मत्ती 8:16
येशू समस्‍त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै, राज्‍यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्‌नुभयो। मत्ती 9:35
मानिसहरू आश्‍चर्यले अत्‍यन्‍तै चकित भए, र भन्‍न लागे, “उहाँले सबै कुरा असल गर्नुभएको छ। उहाँले बहिरालाई सुन्‍ने र गूँगालाई बोल्‍नेसम्‍म पनि तुल्‍याउनुहुन्‍छ।” मर्कुस 7:37
तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, “प्रभु, तपाईं यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्नेथिएन। यूहन्ना 11:21
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “के मैले तिमीलाई भनेको होइनँ, ‘तिमीले विश्‍वास गर्‍यौ भने परमेश्‍वरको महिमा देख्‍नेछौ’?” यूहन्ना 11:40
अनि यो कुरा भन्‍नुभएपछि उहाँ उच्‍च सोरले कराउनुभयो, “लाजरस, बाहिर निस्‍की आऊ।” 44त्‍यो मृत मानिस त्‍यसको हात-खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेह्रिएकैमा बाहिर निस्‍की आयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “त्‍यसको बन्‍धन खोलिदेओ, र त्‍यसलाई जान देओ।” यूहन्ना 11:43-44
पिताले सबै थोक उहाँका हातमा दिनुभएको छ, र उहाँ परमेश्‍वरको तर्फबाट आउनुभएको हो, र परमेश्‍वरकहाँ नै जाँदैहुनुहुन्‍छ भन्‍ने कुरा येशूले जान्‍नुहुँदथियो। 4अनि उहाँ भोजनबाट उठ्‌नुभयो, र बाहिरी वस्‍त्र एकातिर राखी एउटा तौलिया आफ्‍नो कम्‍मरमा बेह्रनुभयो। 5तब उहाँले बाटामा पानी खन्‍याउनुभयो, र चेलाहरूका गोडा धुन लाग्‍नुभयो, र आफूले बेह्रेको तौलियाले तिनीहरूका गोडा पुछ्‌न लाग्‍नुभयो। यूहन्ना 13: 3-5
बिहान सबेरै, सबै मुख्‍य पूजाहारीहरू र जनताका धर्म-गुरुहरूले येशूलाई मृत्‍युदण्‍ड दिन भनी उहाँको विरुद्धमा सरसल्‍लाह गरे। 2अनि तिनीहरूले उहाँलाई बाँधेर लगे, र हाकिम पिलातसकहाँ सुम्‍पिदिए। मत्ती 27: 1-2
जब तिनीहरू खप्‍परे भन्‍ने ठाउँमा आए, तब त्‍यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे, र ती अपराधीहरूमध्‍ये एक जनालाई दाहिनेपट्टि र अर्कालाई देब्रेपट्टि क्रूसमा टाँगे। लूका 23:33
'त्‍यसरी ख्रीष्‍ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्‍नलाई एकै पल्‍ट बलि हुनुभयो, र उहाँ दोस्रो पल्‍ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्‍नका निम्‍ति होइन, तर उत्‍सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्‍ति।
योसेफले मृत शरीर लिएर सफा मलमलको कपड़ाले बेह्रे, 60र तिनले चट्टानमा खोपेर बनाएका आफ्‍नै नयाँ चिहानमा त्‍यो राखे, र चिहानको मुखमा एउटा ठूलो ढुङ्गा गुड़ाइदिए, र तिनी गए। मत्ती 27:59-60
हप्‍ताको पहिलो दिन बिहान अँध्‍यारो छँदै मरियम मग्‍दलिनी चिहानमा आइन्, र तिनले ढुङ्गा चिहानबाट हटाइएको देखिन्‌। यूहन्ना 20: 1
मरियम मग्‍दलिनी गइन्, र चेलाहरूलाई सुनाइन्, “मैले प्रभुलाई देखें।” अनि उहाँले भन्‍नुभएका कुरा तिनीहरूलाई तिनले भनिदिइन्‌। यूहन्ना 20:18
त्‍यही दिन, अर्थात्‌ हप्‍ताको पहिलो दिनको साँझ, जब यहूदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्‍द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनुभयो, र तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूलाई शान्‍ति!” 20यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्‍ना हात र कोखा पनि देखाउनुभयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। यूहन्ना 20:19-20
किनभने मैले जे पाएँ त्‍यसैलाई सबैभन्‍दा मुख्‍य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्‍पिदिएँ, अर्थात्‌ पवित्र धर्मशास्‍त्रअनुसार ख्रीष्‍ट हाम्रा पापका निम्‍ति मर्नुभयो। यशै ५३:५-१२ 4उहाँ गाडिनुभयो, र पवित्र धर्मशास्‍त्रअनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। 1 कोरिन्थी 15: 3-4
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “बाटो, सत्‍य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्‍दैन। यूहन्ना 14:6
किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्‍यौ, र परमेश्‍वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्‍नो हृदयमा विश्‍वास गर्‍यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। रोमी 10: 9
'यसकारण पश्‍चात्ताप गर्नुहोस्‌ र फर्कनुहोस्, कि तपाईंहरूका पाप मेटिऊन्, र परमप्रभुको उपस्‍थितिबाट आनन्‍दको समय आओस्,। प्रेरित 3:19
प्रेम के हो भनी हामी यसैबाट थाहा पाउँछौं, कि उहाँले हाम्रा निम्‍ति आफ्‍नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि आफ्‍ना दाजुभाइहरूका निम्‍ति आफ्‍नो प्राण दिनुपर्छ। 1 यूहन्ना 3:16
तपाईं अहिले नै परमेश्वरसित कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँसँग सम्बन्ध सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रार्थना: प्रिय येशू, म विश्वास गर्छु कि तपाईं मात्र एकमात्र ईश्वर हुनुहुन्छ। म मेरो सबै पापबाट पश्चाताप गर्दछु। कृपया मलाई माफ गर्नुहोस्। मेरो स्थानमा मर्नु भएकोमा धन्यवाद। म तपाईलाई आफ्नो जीवनमा लिन चाहन्छु। कृपया मेरो जीवनको प्रभु हुनुहोस्। म तपाईलाई भरोसा गर्नेछु र तिमीलाई पालन गर्दछु। तपाईंसँग अनन्त जीवनको वरदानको लागि धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन।
यदि तपाइँ यो प्रार्थना प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई इमेल गर्न तल क्लिक गर्नुहोस्। हामी थप जानकारीको साथ प्रतिक्रिया गर्नेछौं।
Created with images by BkrmadtyaKarki - "natural light old cool grandpa vendor patan" • qimono - "sunrise space outer globe world earth sun" • Simon - "nepal yak tibetan" • _Alicja_ - "without bush spring" • Francisco Jesús Navarro Hernández - "untitled image" • Arjunsyah - "His name is Nova" • Rac Cr - "Eye See You" • Nathan Hulsey - "Apple Picking" • David Clode - "Tiger snake" • Carlos Alberto Gómez Iñiguez - "untitled image" • Ian Espinosa - "Elizabeth" • Ashim D’Silva - "untitled image" • Ron Hansen - "untitled image" • Chirag Thapa - "Proud owner"